अभिभावक हुनु बोझ होइन, अवसर | चितवन पोष्ट
हामीले यसअघि अभिभावकका मूल्य, आदर्श, दायित्व र संवेदनशीलताका सम्बन्धमा चर्चा ग¥यौँ । अब विभिन्न व्यक्ति अभिभावकका सन्दर्भमा के भन्छन्, ती विषयमा चिन्तन गरौँ । पूर्वीय परम्परामा आमा र बुबालाई देवतासमान मानिएको छ । मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः । किन देवता मानिएका होलान्, बाबुआमा भन्ने कुरा त हामीलाई अवश्य थाहा छ । देवता त्यो हो जसले कुनै आशा, अपेक्षा र सर्त नराखी परोपकार र कल्याणको काम गर्छ । देवताको काम जहिले पनि अर्काकै लागि बाँच्ने हुन्छ, अर्काकै लागि बाँच्ने, हाँस्ने र हँसाउने हुन्छ ।
बाबुआमाको कर्तव्य भनेकै सन्तानलाई सुसंस्कृत बनाउनु हो, पढाउनु हो, लेखाउनु हो । जुन बाबुआमाले छोराछोरीलाई लेखपढ गराएनन्, सदाचार सिकाएनन्, तीमध्ये माता वैरी हुन् भने पिता शत्रुबराबर हुन्छन् । जसरी हाँसहरुका बीचमा बकुल्लो सुहाउँदैन, विद्वान्हरुको सभामा पनि अपठित सन्तान सुहाउँदैन । माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो नपाठितः । नशोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथाः ।। छोराछोरीलाई पढाउनुको अर्थ बाबुआमाले सदाचारी बनाउनु हो । आज यति धेरै पढेका छोराछोरी छन्, तर पनि अपठितजस्तै छन् । जीवन के हो ? हाम्रो कर्तव्य के हो ? मनुष्य जीवनको गौरव र गरिमा के हो ? के हो, सामाजिक उत्तरदायित्व ? परिश्रम के हो ? यस्ता प्रश्नहरुप्रति हाम्रा छोराछोरी बेखबर छन्, पढेर पनि नपढेजस्तै छन् । यस्तो प्रकारको पढालेखाइको खासै अर्थ हुँदैन ।
अभिभावकको प्रेम भनेको एकमात्र त्यस्तो प्रेम हो, जुन साँच्चै नै निःस्वार्थ, निसर्त र क्षमापूर्ण हुन्छ’- टिपी चाइना भन्ने विद्वान्को यस्तो विचार रहेको छ । उनको भनाइमा अभिभावकको प्रेमलाई अन्य कुनै पनि प्रेमसित तुलना गर्न सकिँदैन । अन्य प्रेमहरु स्वार्थमा आधारित हुन्छन्, आशा र अपेक्षामा आधारित हुन्छन् । तर, हाम्रा अभिभावकले हामीलाई त्यसरी गहिरो अपेक्षा र आशा राखेर कहिल्यै स्नेह गर्दैनन् ।
‘अभिभावकको प्रेम भनेको एकमात्र त्यस्तो प्रेम हो, जुन साँच्चै नै निःस्वार्थ, निसर्त र क्षमापूर्ण हुन्छ’— टिपी चाइना भन्ने विद्वान्को यस्तो विचार रहेको छ । उनको भनाइमा अभिभावकको प्रेमलाई अन्य कुनै पनि प्रेमसित तुलना गर्न सकिँदैन । अन्य प्रेमहरु स्वार्थमा आधारित हुन्छन्, आशा र अपेक्षामा आधारित हुन्छन् । तर, हाम्रा अभिभावकले हामीलाई त्यसरी गहिरो अपेक्षा र आशा राखेर कहिल्यै स्नेह गर्दैनन् । बालबालिकाले यदाकदा गर्ने गल्तीहरुका कारण रिसाएर कहिल्यै पनि अभिभावकले प्रतिशोधको भावना राख्नुहुँदैन । अभिभावक जत्तिको क्षमाशील अर्को कोही हुन सक्दैन ।
हामी अभिभावकले कहिल्यै पनि आफ्ना छोराछोरीले मेरो लागि यसो गरुन्, उसो गरुन् भनेर आशा गर्नुहुँदैन । छोराछोरीले जति गरे पनि अभिभावकको चित्त बुझ्दैन । जसरी छोराछोरी जति ठूला भए पनि अभिभावकका लागि ती सानै हुन्छन्, त्यसैगरी तिनले जति नै ठूलो सेवा, स्याहार र सम्मान गरे पनि अभिभावकलाई थोरै नै हुन्छ । यो सत्य पनि हो, किनकि संसारमा अभिभावक हुनुभन्दा ठूलो कुनै तपस्या हुँदैन । छोराछोरीले हाम्रो यस्तो ठूलो तपस्यालाई नजरअन्दाज पनि गरिदिन सक्छन् । उनीहरुले त्यसलाई सजिलै महसुस गर्न सक्दैनन्, किनकि त्यस्तो तपस्याबारे तिनलाई केही पनि थाहा हुँदैन ।
‘जतिबेला तिमीले तिम्री आमाको आँखामा हेर्दछौ, त्यतिबेला तिमीले संसारकै सबैभन्दा पवित्र प्रेम प्राप्त गर्न सक्दछौ’— मिच एलबमका अनुसार आमाको आँखा केवल आँखा नभएर प्रेम र स्नेहको सागर हो । सानो आँखाभित्र अपार स्नेह—सिन्धु भरिएको हुन्छ । यसैलाई मातृत्व भनेर भनिन्छ । बाबु नहुँदा छोराछोरीलाई जति दुःख, अप्ठ्यारो र असुविधा हुन्छ, त्योभन्दा कयौँ गुना अप्ठ्यारो आमा नहुँदा हुन्छ । आमासित हुँदा बालबालिका उनको स्नेह–सिन्धुमा पौडन, गोता लगाउन पाएर धन्य भएका हुन्छन् । एकछिन यताउता गए पनि घरमा आउँदा एकछिन आमालाई नदेख्दा केटाकेटी विचलित हुन्छन् । त्यसैले, आफ्नो महत्ता बुझेर आफूभित्र आफ्ना सन्तानप्रति त्यो महान् स्नेहको सिन्धु तयार पार्नु हरेक आमाहरुको दायित्व हुन जान्छ ।
आजका मानिस स्वार्थी भएका छन् । सन्तान सकेसम्म नजन्माउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सौन्दर्यका नाममा स्तनपान गराउन अप्ठ्यारो मान्ने मनोवृत्ति आमाहरुमा हुर्कंदै गएको छ । बालबच्चा पाल्ने जिम्मा के मेरोमात्रै हो ? अथवा ‘आमा’ भएको नाममा मैलेमात्रै छोराछोरी भनेर बसेर हुन्छ ? के मेरो करियर छैन ? के मेरो निजी जीवन हुँदैन ? के मलाई पनि निर्धक्क र स्वतन्त्र भएर घुमफिर हुने अधिकार छैन ? यस्ता प्रश्नहरु आज चर्को गरी उठेका छन् र यिनकै वरपर आमा अर्थात् मम्मीहरुको जीवनशैली विकसित हुँदोछ । यहीँनेर आमाहरुले निकोलस पार्कको विचारलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘अभिभावक हुनु भनेको के होला ? यो तिमीले गर्ने सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम हो, तर बदलामा तिमीलाई यसले निसर्त प्रेमको अर्थ सिकाउँछ ।’ बालबालिका हुर्काउन, तिनलाई लालनपालन गर्न व्यहोर्नुपर्ने दुःख सम्झँदा साँच्चै नै गाह्रो हुन्छ र त्यस्तै जीवन बाँच्न झन् गाह्रो हुन्छ, तर बालबालिकालाई हेरेर चित्त बुझाउन सकिन्छ, किनकि हामीलाई पनि हाम्रा बाबुआमाले त्यसरी नै हुर्काएका थिए ।
‘मेरा अभिभावक मेरा मेरूदण्ड हुन् र छन् । अभिभावकको समूह मात्र यस्तो समूह हो, जसले तिमीले शून्य अङ्क पाउँदा पनि सहयोग गर्दछ र चालीस पाउँदा पनि’— कप ब्रियान्टले यसरी अभिभावकको महिमा गान गरेका छन् । बालबालिकाका हरेक प्रयासमा हौसला दिने सबैभन्दा महान् पात्रहरु भनेका नै बाबुआमा हुन् । हाम्रो असफलतामा अधिकांश मानिस हाँस्छन्, ठूलो संसार हाँस्छ, तर हाम्रा बाबुआमा चिन्तित हुन्छन् र हामीलाई अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहन दिन्छन् । हाम्रा हर अप्ठ्याराहरुलाई सजिलो बनाउन पाएका दुःख यदि तिनले हामीलाई सुनाउने हो भने बल्ल हामी दङ्ग पर्ने थियौँ, तिनले त त्यो सास्तीको ५–१० प्रतिशतभन्दा धेरै कहिल्यै भन्दैनन्, बरू छोराछोरीले मैले गरेको दुःख थाहा नपाए हुन्थ्यो भनेर मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँसिरहेका हुन्छन् । हामी अभिभावक पनि हाम्रा सन्तानका लागि यसरी नै मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भए पनि हाँस्न सक्नुपर्दछ ।
तर ‘तपाईंका केटाकेटी तपाईंको उपस्थिति चाहन्छन्, उपहार होइन’—जेस ज्याक्सनले भनेको यो भनाइलाई हामीले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । पैसा, उपहार दिएर बालबालिकालाई केही समयका लागि उल्लु बनाउन सकिएला, फकाउन सकिएला तर सधैँ फकाउन कदाचित् सकिँदैन । बालबालिकालाई चाहे पैसा भएर होस् वा नभएर होस्, चाहे उपहार भएर होस्, चाहे नभएर होस्, वश् बाबुआमा नजिकमा उभिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठूलो चाहना हुन्छ । त्यस्तो उपस्थिति जस्तो प्रकारको भए पनि होस्, तर बच्चाले फिल गर्नुपर्‍यो । ऊ म एक्लै छु् अथवा बाबाआमा मेरो पहुँचभन्दा पर हुनुहुन्छ भन्ने नपरोस् ।
फ्रेङ्कलिन रूजवेल्ट भन्दछन्, ‘हामी हाम्रा बाबुनानीको भविष्य तयार पार्न त नसकौँला, तर उनीहरुलाई कम्तीमा भविष्यका लागि तयार गर्न भने अवश्य सक्छौँ ।’ हाम्रो दायित्वको मूल यहीँनेर आएर फुट्छ । हाम्रो दायित्व भनेको नै हाम्रा बाबुनानीलाई भोलिका लागि तयार पार्नु हो । यसका लागि उनीहरुको तयारी आजैदेखि हुन जरूरी छ । उनीहरु आज तयार हुन हामी उनका अगाडि सहयोगका लागि तयार भएर देखा पर्नुपर्दछ । तपाईंको जति गहिरो उपस्थिति, त्यति नै ती बलिया !
आउनुस्, अभिभावकीय दायित्व निर्वाहमा कतै नचुक्ने गरी काम गरौँ । बालबच्चालाई हामी उनीहरुदेखि टाढा छौँ र तिनको पहुँचभन्दा पर छौँ भन्ने कहिल्यै नहोस् भनेर सतर्क बनौँ । अभिभावक हुनु बोझ होइन, अवसर हो । भाग्यमानी मान्छेमात्रै बालबालिकाको सेवा, सहयोग र सम्मानमा जुट्ने गर्दछन् । जसले बोझ ठान्छ, ऊ असल अभिभावक बन्न सक्दैन । रमाइलोमा बच्चा जन्माउने र झाडी–कान्लातिर मिल्क्याएर भाग्ने क्रूरतम अभिभावकको सङ्ख्या पनि हिजोभन्दा आज बढ्दै छ ।
हाम्रा छोराछोरी जति हामीले सोचेका छौँ, त्यति खराब छैनन् । हामी र तिनको उमेर कम्तीमा पनि २० वर्षको ग्याप त पक्कै छ । हाम्रो जीवनशैली उनीहरुको जस्तो हुन सक्दैन भने तिनको जीवनशैली पनि हाम्रोजस्तो हुनुपर्ने भन्ने के छ ? पहिलो त, पर्याप्त दूरी छ, बाबु पुस्ता र छोरोपुस्ताका बीचमा । यी चकचक छन् भने हामी पनि चलमलाउन पाएका छौँ, यिनले चर्को स्वरमा बोलेको बोल्यै गरेर कुरा गर्दा हामी पनि थप एक्टिभ भएर बोल्न पाएका छौँ । यिनकै कारण यताउता गर्ने, गतिशील हुने मौका पाइएको छ । यी आफू पनि चलायमान छन् र मलाई पनि चलायमान बनाएका छन् भनेर खुसी हुनुपर्दछ । त्यसैले, बालबालिका बोझ नभएर हाम्रा लागि दिव्य अवसरहरु हुन् ।
हाम्रा नीतिमा अभिभावकको महिमा गान जसरी गरिएको छ अथवा प्रसिद्ध चिन्तक, विचारकहरुले जसरी अभिभावकका सन्दर्भमा आफ्ना भावना र विचार पोखेका छन्, त्यसरी नै हामी तिनका ती महान् विचारहरुलाई आत्मसात् गर्दै र जीवनमा गहिराइका साथ लागू गर्दै एउटा असल र आदर्श अभिभावक बन्नतिर लागौँ । आफू पनि रमाऔँ र बच्चालाई पनि रमाउने बनाऔँ ।